Cabdulfataax Al-Siisi: Intaan xilka hayo Ikhwaanka meelna ugama banaana Masar - BBC News Somali
Cabdulfataax Al-Siisi: Intaan xilka hayo Ikhwaanka meelna ugama banaana Masar
13 Oktoobar 2018
Image caption Madaxweynaha Masar, Cabdulfataax Al-Siisi
Madaxweynaha dalka Masar, Cabdulfataax Al-Siisi, ayaa sheegay in aanay dalkiisa meeli uga banaanayn ururka Ikhwaanul Muslimiinka inta uu isagau xilka hayo.
Madaxweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in shacabka Masar aanay aqbali karin in ay xukunka ku soo noqdaan maadaama sida uu hadalka u dhigay aragtida ururkaasi tahay mid aan nolosha la jaan qaadi karin oo lid ku ah.
Al-Sisis waxa uu warkaasi ku sheegay wareysi uu Jimcihii siiyay wargeyska Al-Shaahid ee ka soo baxa dalka Kuwait, markaas oo uu sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiinku bilaabay fawdada iyo qaska ka taagan dalal badan oo Carbeed sida Yemen iyo Liibiya.
Dhanka kale waxa uu carrabka ku dhuftay in waxa lagu sheegay kacdoonkii Gugii Carbeed uu ahaa mid ka dhashay duruufo xun oo taagnaa haseyeeshee lagu maareeyey hab khaldan.
Madaxwaynaha Masar oo saxiixay sharci lagu xakamaynayo Internet-ka
Al-Siisi oo muddo xileedkiisu dhamaanayso sida dastuurka dalkaasi dhigayo sanadlka 2022-ka ayaa hore u sheegay in go'aanka lagula heshiin karo ururka Ikhwaanu Muslimiinku yahay mid u yaal shacabka Masar.
Bishii Juun ee sannadkii 2013-kii ayaa ciidanka oo uu markaa hogaaminayey markii uu ahaa wasiirka gaashaandhiggu waxay xukunka ka tuureen madaxweynihii ka tirsanaa ururka Ikhwaanul Muslimiinka ee Maxamed Mursi, dhawr maalmood oo ay socdeen mudaharaadyo lagaga soo horjeeday xukuumadiisu.
Xukuumadda Masar ee haatan talada haysaa waxay ururkaa u taqaan in uu yahay mid aragagixso ah, waxaanay mamnuucday dhammaan dhaqdhaqaaqyadiisa, waxaanay sidoo kale la wareegtay hantidii ururkaasi iyo dad badan oo ka tirsanaa hantidiida, waxaanay sidoo kale ku eedaysaa masuuliyadda weerarradii ka dhacayey dalkaas oo ay ku dhinteen askar ka tirsan milatariga, booliska iyo dad rayid ahba.
Madaxweynaha Masar oo wargeysku wax ka waydiiyey arrinta Suuriya ayaa waxa uu yidhi "Dalkaasi wuu ka soo kabanayaa dhibaatadii soo martay haatanna waxa uu u baahanyahay in dedaal loo galo sidii dib loogu dhisi lahaa mar kale."